အမှန်တော့ ဆရာဦးကိုနီကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု တရားခံဟာ….. စစ်တပ်/ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ / မဘသ အဖွဲ့/ မျိုးချစ် မျိုးညစ်ဘုန်းကြီးတွေ ဘဲ ဖြစ်ပါတယ် – ပြစ်မှုမှာ ဖုန်းကွယ် ပူးပေါင်းကူညီသူတွေကတော့ DASSK နဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင် တွေ ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ် | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeအမှန်တော့ ဆရာဦးကိုနီကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု တရားခံဟာ….. စစ်တပ်/ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ / မဘသ အဖွဲ့/ မျိုးချစ် မျိုးညစ်ဘုန်းကြီးတွေ ဘဲ ဖြစ်ပါတယ် – ပြစ်မှုမှာ ဖုန်းကွယ် ပူးပေါင်းကူညီသူတွေကတော့ DASSK နဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင် တွေ ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်
အမှန်တော့ ဆရာဦးကိုနီကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု တရားခံဟာ….. စစ်တပ်/ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ / မဘသ အဖွဲ့/ မျိုးချစ် မျိုးညစ်ဘုန်းကြီးတွေ ဘဲ ဖြစ်ပါတယ် – ပြစ်မှုမှာ ဖုန်းကွယ် ပူးပေါင်းကူညီသူတွေကတော့ DASSK နဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင် တွေ ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်
ဘာသာရေးလူမျိုးရေးပြသနာတွေ ပေါ်မလာရအောင်…
ဘာသာရေး လူမျိုးရေးအရလုပ်ကြံတာမဟုတ်ဘူး…လို့
ကျနော်တို့ ဝိုင်းဝန်း ထိန်းသိမ်း ရေးသားခဲ့ကြတယ်….
ဒီကနေ့တော့ …အစိုးရက…ဆရာဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှုဟာ….
ဘာသာရေးကြောင့် ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ …ကြေငြာ သွားခဲ့တယ်….
တရားခံ ဘယ်မှာမှန်းမသိဘဲ…ဘာကြောင့် လုပ်ကြံတာရဲ့ အကြောင်းရင်းကို
တပ်မတော်အရာရှိကြီး အဆင့်အထိ တာဝန်ထမ်းခဲ့သူတယောက်ကို…
လူငယ်…လို့ သုံးနှုန်းသွားခဲ့တာဟာ…..တော်တော် အောက်တန်းကျကျ
ပေါ့ပျက်ပျက်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်…
အမှန်တော့ ဆရာဦးကိုနီကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု တရားခံဟာ…..
စစ်တပ်/ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ / မဘသ အဖွဲ့/ မျိုးချစ် မျိုးညစ်ဘုန်းကြီးတွေ
ပြစ်မှုမှာ ဖုန်းကွယ် ပူးပေါင်းကူညီသူတွေကတော့ DASSK နဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်
တွေ ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်….
လူသတ်သမား အုပ်စုက……မွတ်စလင် မို့ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး….
အစိုးရအဖွဲ့က….မွတ်စလင်ကို လုပ်ကြံခဲ့တာမို့….တရားခံအစစ်ကို ဖျောက်
ဖျက်ဖုံးကွယ်လိုက်တာပါ…
← ပြည်သူ့ နှလုံး မသိမ်းကြုံးလျင် ပြည်သူ့ ခွန်အား မကိုးစားလျင် ဓားသွားလည်း ကြွေ လှံလည်း ခွေအံ့
ဆရာဦးကိုနီအားလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် သင်၏ အစိုးရအဖွဲ့က အစွမ်းကုန် လိမ်ညာ ဖုံးကွယ်လိမ့်မည်…ဟု ယုံကြည်ထားခဲ့သော်လည်း… ယခုအခြေအနေအထိ အောက်တန်းကျကျ…ဗျောင် လိမ်ညာလိမ့်မည်.. ဟု….ထင်မထားခဲ့ပါ →
9 thoughts on “အမှန်တော့ ဆရာဦးကိုနီကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု တရားခံဟာ….. စစ်တပ်/ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ / မဘသ အဖွဲ့/ မျိုးချစ် မျိုးညစ်ဘုန်းကြီးတွေ ဘဲ ဖြစ်ပါတယ် – ပြစ်မှုမှာ ဖုန်းကွယ် ပူးပေါင်းကူညီသူတွေကတော့ DASSK နဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင် တွေ ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်”
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် motive က ဘာသာရေးအခြေခံတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောတဲ့အတွက် ဒါက religious terrorism ပဲ ..
အမှုတွဲထဲမှာပါသူအားလုံးကို Buddhist terrorists လို့ခေါ်ရင် စိတ်မဆိုးကြနဲ့။
Buddhist extremist terrorism. Those who are promoting this: Ma Ba Tha leaders like Thidagu, Wirathu led monks, their sponsors and doners must be arrested, investigated and charged.
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ရှင်းပြတဲ့ စကားတွေက
ဥပဒေပညာရှင် ဆရာဦးကိုနီကို အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်တဲ့ လူသတ်သမားတွေ အုပ်စုဘက်ကနေ ရပ်တည်လျှောက်လဲချက် ပေးလို့ရတဲ့ ရှေ့နေအလားတောင် ထင်စရာဖြစ်တယ်။
Tint Zaw Oo
ဆ ဒ္ဒန် ဆင် မင်း ပြ ဇာတ်
အ စွ ယ် လို သူ မိ ဖု ရား
အ သွား စေ သူ မင်း ဧ က ရာ ဇ်
(တေ့ ပစ် သူ ဘု ရား ကျွန် တော်)
အဲ ဟုတ် ပေါင်
လေး ပစ် သူ ဘု ရား ကျွန် တော်
ကြံ ဖေါ် ကြံ ဖက် ဤ သုံး ဦး အ နက် တွင် မှ
ကံ ကွက် ၍ အ ကျွန့် ထံ
(အုတ် နီ ခဲ လာ မှန် လို့)
အဲ ဟုတ် ပေါင် ….သေ ဖို့ ရယ် ဖန် လေ ရဲ့။
အော် စူ ဠ သု ဘဒ်
မ နူး မ နပ် သည် အ ရွယ်
လူ ငယ် တို့ စိတ် ဓါတ်
မ ပြတ် သည့် ရန် ငြိုး
ဒီ ဘ ဝ ထိ ဆိုး လှ ချည့်
ခို ကိုး မဲ့ ငါ့ ကြ မ္မာ ကို
မိ လို ဖ လို တွေး ဆ လို့
(အ မယ် မင်း…)
ဖေး မ ကြ ပါ ဦး…
သော နု တ္ထို ငို ချင်း ချ ခိုက်
ပြည် ဖုံး ကား ကျလာ စေ။
နဝတ ၊ နအဖ ၊ ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်များသည် မိမိတို့အချင်းချင်း မည်သို့ပင် စားခွက်လုပွဲများ ၊ အုပ်စုဖွဲ့အာဏာ အားပြိုင်မှုများ . . . စသည်ဖြင့် အတွင်းစည်းတွင် အချင်းချင်းကြား ပဋိပက္ခပြသနာများ မည်သို့ပင်ရှိနေကြစေမူကား . . . ။
၄င်းတို့အားလုံး၏ ဘုံတူညီချက်တွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအား(ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ အာဏာအခန်းကဏ္ဍအပိုင်းကို) အနုနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ နောက်တနည်းအားဖြင့် အကြမ်းနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ရေကုန်ရေခမ်း ကာကွယ်သွားကြမည်ဟူသော အပိုင်းတွင်မူ အားလုံး တူညီကြသည်ပဲ မဟုတ်ပါလားခင်ဗျား။
ထို့ကြောင့် ဥပဒေပညာရှင် ဆရာဦးကိုနီအား အကြမ်းဖက် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သောအုပ်စုသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအား အကြမ်းနည်းဖြင့် ကာကွယ်လိုကြသော အုပ်စုဖြစ်ပြီး ၊ ယခုသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်သောအုပ်စုမူကား ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအား အနုနည်းဖြင့် တနည်းအားဖြင့် ဥပဒေကို လိုသလိုကစားကာ လှုပ်ရှားမည့်နည်းသုံးပြီး ကာကွယ်သွားကြမည်ဟူသော ခံယူထားကြသော အုပ်စုသာ ဖြစ်ပါတော့သည်ခင်ဗျား။
တိုင်းပြည်တခုလုံးအတွက် အဆိုပါ အုပ်စုနှစ်စုလုံးသည် တစ်ဖွဲ့သည် အလွန်ရက်စက်ကြမ်းတမ်းမည့် အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး နောက်တဖွဲ့သည် အလွန်ကလိမ်ကကျစ်ကျမည့် အဖွဲ့သာဖြစ်ပေမည်ဟူ၍လည်း ဆင့်ပွား တွေးဆ ဆင်ခြင်လို့ရပါသည်ခင်ဗျား။
ဂဠုန်ဦးစော ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်လေးက လူငယ်သဘာဝ စိတ်ဘဝင် မကျစရာ ရှိလို့ သူ့ထက်ငယ်တဲ့ လူငယ် ကလေးလေးတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး လူသတ်ခဲ့ တယ်
ဒါပေမဲ့ ဦးစောက လူသတ်မှု ပဲ ကျူးလွန်ခဲ့တာ
—မျိုးချစ်စိတ် ဗန်းပြပြီး ဘုရားမခိုးဖူး
—မုသာဝါဒ မကျူးလွန်ဖူး သူသတ်တာ ဝန်ခံတယ် အောက်တန်းတကျ နဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ထမိန်ခြုံ မနေဖူး
ရင်ကြားစေ့ဖို့ တွေ ငြိမ်းချမ်းဖို့တွေ ပြောပြီး သွေးမကြောင်ဖူး
ဂဠုန်ဦးစော အဝီစိ မရောက်ဖူး သေချာတယ်
Royal Sha Meem
မှားမှာပေါ့ … လို့,
မှားကြဟေ့´… လို့ ,
အော်ပြောလိုက်ကြစမ်းပါ ။ ။
မောင်လှမျိုး(ချင်းချောင်းခြံ)